तपाँहरूलाई थाहा छ ? नेपाली नोटहरू कहाँ र कसरी छापिन्छन् त ? – हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) -
Home News तपाँहरूलाई थाहा छ ? नेपाली नोटहरू कहाँ र कसरी छापिन्छन् त ?...
तपाँहरूलाई थाहा छ ? नेपाली नोटहरू कहाँ र कसरी छापिन्छन् त ? – हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ को दफा ५२ अनुसार नोट निष्का-शन गर्ने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंक;लाई रहेको छ । यसैको उपदफा (४) अनुसार बैंकले आवश्यक;ताअनुसार विभिन्न दरका नोट निष्काशन गर्न सक्छ ।
नोट निष्काशन गर्दा नोटमा देखिने चित्र, आका-र र दर नेपाल सरकारको स्वीकृ-तिमा र नोटमा नदेखिने चित्र, आन्तरिक सुरक्षाको व्यवस्था, छ;पाइ गर्ने व्यवस्था समि;तिले निर्णय गरेब;मोजिम हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अध्य;यन प्रतिवेदनको आधारमा आवश्यकताको आधारमा नोट छापिन्छ ।
त्यसरी छापिने नोटमा ६ अङ्कको नम्बर राखि-एको हुन्छ । ६ अङ्कको नम्बर राखी ‘अ १’ बाट नोट छाप्न शुरू गरी ‘अ १००’ सम्म पुर्याइन्छ । यसको आव;श्यकताअनुसार ‘क’ देखि ‘ज्ञ’ सम्म नम्बरसमेत राखी नोट छाप्ने काम गरिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा गभर्नरस;हित’को विज्ञ सम्मिलित नोट डिजा;इन समिति रहे;को हुन्छ । नोट डिजा’इन गरी राष्ट्र बैङ्कको बोर्डबाट स्वीकृति गराएपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिन्छ । स्वीकृत भएको नोटमा गभ:र्नरको हस्ता;क्षर स्क्यान गरेर राखी नोट छाप्ने काम गरिन्छ ।
राष्ट्र बैङ्कले नोट छाप्नु’पूर्व ग्लोबल टेण्डर आ’ह्वान गरेर प्राविधिक र आर्थिक पक्ष सबल रहेको कम्पनीलाई नोट छाप्ने कामको जिम्मा दिइन्छ । छापि’एको नोटको ‘प्रिफेक्स नम्बर’ चलनचल्तीमा ल्याएको सूचना राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेपछि मात्र नयाँ नोटको मान्यता हुन्छ ।
समि’तिको राय लिई नेपाल स’रकारले राजप’त्रमा सूचना प्रका’शन गरी जुनसुकै बैङ्क नोट कुनै तोकिएको ठाउँ वा अड्डाबाहेक अन्यत्र नच’ल्ने गराउ’न सक्छ । बैङ्कद्वारा कानूनी ग्राह्य बनाई निष्का:शन गरिएको नोट नेपालभित्र सबै किसिमको सार्वज’निक तथा व्यक्तिगत ऋण चुक्ता गर्न सर्वस्वीकार्य हुने नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐनको दफा ५३ मा व्यवस्था गरेको छ ।
Previous articleकठै,गरिब हुनु जस्तो पि डा के हुन्छ र !म र्दा श व समेत उ ठाउने मान्छे भएनन् (भिडियो हेर्नुस्)
Next articleजय किशन बस्नेतको छोरीलाई यस्तो सम्म गरेछन, यसरि ब,चाए आफ्नो छोरीलाई (भिडियो सहित)